नेपाली बैंक जित्यो इटलीमा २ अर्बको मुद्दा – सडक मिडिया
नेपाली बैंक जित्यो इटलीमा २ अर्बको मुद्दा
सडक मिडिया June 9, 2020 0
काठमाडौं: इटलीको अदालतमा चलेको जमानतसम्बन्धी एउटा मुद्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्यांकले जितेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इटालीको अदालतमा परेको २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको मुद्दा जितेको हो ।
तनहुँ जलविद्युत परियोजनाको ठेकदार कम्पनी सीएमसीको काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम ब्यांकले परियोजनालाई तिरेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण छोडेर भागेपछि तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले पनि सीएसीसँगको ठेक्का तोडेको थियो । ठेक्का तोडिएपछि ब्यांकले तनहुँ जलविद्युतलाई जमानतबापतको करीब रु. २ अर्ब तिरेको थियो । तर, इटलीको ब्यांकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्यांकलाई सो रकम तिरेको थिएन।
तर, सीएमसीले इटलीको एक ट्राइब्युनलमा आफ्नो जमानत जफत गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा हालेको थियो । यसअघि उक्त स्थानीय अदालतले सीमएसीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध ब्यांकले पुनरावेदन दिएको थियो । पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै तीन न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले ब्यांकको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ।
बैंकले पहिले मुद्दा हारेको थियो । पछि पुनरावेदन गरेपछि मुद्दा जितेको हो । बैंकले ८५ करोड १४ लाख १६ हजार रुपैयाँ र ८७ लाख ४९ हजार युरो (१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी) ग्यारेन्टी दिएको थियो ।
Previous Post: नायिका निरिषा बस्नेतलाई कोरोना देखियो
Next Post: प्रदेश २ मा ५४ संक्रमित थपिए
अर्का अभिनेताले पनि रोजे सुशान्तको बाटो…हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ! 3,735 views